Numinus Wellness Waxay Daraasad Caafimaad Ku Samaysaa 14 Qof Oo Caafimaad Qaba Oo Ku Saabsan Psilocybin Dabiici ahaan Loo Soo Saaray • Dawooyinka Inc.eu
Shirkadda Numinus Wellness waxay ku dhawaaqday daahfurka tijaabo caafimaad oo cusub oo ku dari doonta macluumaadka doodda arrimaha gudaha: si dabiici ah ayaa loo soo saaray psilocybin sida wanaagsan ee psilocybin synthetic?
Tijaabada caafimaad ee wajiga koowaad ee cusub ee Numinus, kaas oo lagu fulin doono iyada oo lala kaashanayo Sayniska KGK, wuxuu tijaabin doonaa sameynta psilocybin ee shirkaddu si dabiici ah u heshay maadooyinka aadanaha.
Maxkamadaynta ayaa la samayn doonta tijaabooyin caafimaad oo lala yeelan doono 14 mutadawiciin caafimaad qaba oo isdiiwaangaliyay. Badbaadada iyo sidoo kale waxyaabaha nafsiga ah waxaa lagu qiimeyn doonaa sameynta likaha loo yaqaan 'Psilocybe likaha' oo ay sameeyeen ayna ka soo saari doonaan shaybaarka Numinus Bioscience ee British Columbia Shirkaddu waxay leedahay rukhsad boqoshaada sixirka si ay u koraan una soo saaraan Kanada.
Numiness Wellness ee Kanada waxay diiradda saaraysaa daraasad caafimaad oo si dabiici ah loo helay psilocybin (afb.)
Numinus wuxuu ku sameeyaa cilmi baaris leh nooc ka mid ah boqoshaada dabiiciga ah
Si ka duwan inta badan daraasadaha caafimaad ee ku saabsan psilocybin illaa maanta, daraasadda Numinus waxay isticmaashaa nooc ka mid ah boqoshaada dabiiciga ah halkii ay ka noqon lahayd nooca dhirta la soosaaray.
Shirkadu ma cadeyn in soosaarida ay kujirto psilocybin gooni ah oo laga soosaaray boqoshaada dabiiciga ah ama qaab dhameystiran oo muuqaal ah oo ay kujiraan psilocybin iyo waxyaabo kale oo dabiici ah iskuday tijaabada.
"Waxaan rumeysanahay inay jiraan faa'iidooyin aad u badan oo laga yaabo inay si dabiici ah u dhacaan daaweynta psilocybin taasoo ka dhigi doonta inay soo jiidasho u yeeshaan cilmi-baarayaasha iyo macaamiisha si isku mid ah," ayuu yiri Sharan Sidhu, sarkaalka sayniska iyo agaasimaha guud ee Numinus Bioscience.
"Waxaan ku kalsoonahay in tijaabadani ay muujin doonto in soo saarista psilocybin ee dabiiciga ahi ay buuxiso shuruudaha sharciyeed ee caafimaadka, badbaadada, tayada, ugu dambeyntiina awood u siineysa helitaanka daawadan."
Ilaha waxaa ka mid ah MuggleHead (EN), NewsWire (EN), NY Times (EN), Maalgeliyeyaasha Waxqabadka (EN), Yahoo Maaliyadda (EN)
Markii ugu horreysay ee cilmi nafsiyeed ETF ayaa maanta looga ganacsadaa isweydaarsiga Canadian NEO, oo siinaya maalgashadayaasha aragti ...